आफ्ना कमाण्डर प्रचण्डलाई चिडियाखानामा हाल्छु भनेका बादलको भित्री प्लान केछ ? — Imandarmedia.com
आफ्ना कमाण्डर प्रचण्डलाई चिडियाखानामा हाल्छु भनेका बादलको भित्री प्लान केछ ?
काठमाडाैं । शुक्रबार राजधानी काठमाडाैं ओली पक्षको जनसभामा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ले दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा रह्यो । नेकपा एकता हुनुअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकदमै निकट हुन् ।
एकतापछि समेत बादल र प्रचण्डबीचको निकता कायम नै थियो । उसो त जनआन्दोलनका मुख्य सहकारी समेत प्रचण्ड र बादल नै हुन् । तर, अहिले नेकपा विभाजित भएपछि उनले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई जावलाखेलको चिडियाखानामा लगेर बन्द गर्नै चेतावनी दिएका छन्।
गृहमन्त्री बादलले सत्ताको विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलन भएपनि नझुक्ने भन्दै आफुहरुको भित्रि प्लानबारे रहस्य खोलेका छन् । थापाले भने, ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन विभिन्न शक्ति परिचालित भएका छन् । उनीहरुले मांसहारी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । कुनै पनि हालतमा नेतृत्व झुक्दैन । अवसरवादीले मांसहारी आन्दोलन गरे उनीहरुलाई जावलाखेलको जूमा लगेर थुनिने छ।’
केही समय अगाडि राजधानीका युवा तथा विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलन साहाकारी मात्रै भएर नहुने, आफूले मांसाहारी आन्दोलन चाहिने बताएका थिए। उनले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न खोज्दा मुलुकमा अस्थिरता निम्तिएको पनि बताए ।
‘अस्थिरता उत्पन्न हुुनुमा राजनीतिक सत्ता जोडिएको छ । ठीक ढंगले बुझेर मात्रै समाना गर्न सक्छौ । मुख्यत राजनीतिक सत्ता र नेतृत्वसँग ३ वटा प्रश्न जोडिएको छ,’ थापाले भने, ‘केन्द्रीय प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको हुन्छ, अध्यक्षसँग र राष्ट्रपतिसँग जोडिएको हुन्छ । तीनटै नेतृत्व अपदस्त गर्ने कुरालाई बुझेनौँ भने असाधारण स्थितिलाई समाधान गर्न सक्दैनौँ । पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्त गर्ने कुरासँग अस्थिरता जोडिएको छ । दुई तिहाइबहमुतको सरकारलाई विस्तथापित र राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने कुरासँग जोडिएको छ ।’
उनले देशलाई प्रतिगमनतिर लगेकाले नारायणहीटी अगाडि जनसभा गरेर गणतन्त्रको रक्षा गर्न खोजेको प्रस्ट्याए । उनले गुट र फुटवादीहरुलाई सचेत हुन पनि सुझाव दिए । गृहमन्त्री थापाले तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको बताएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू गणतन्त्र र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्।